No. 2153, Friday, June 14, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2153, Friday, June 14, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက် (သောကြာ၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉)
မန္တလေး - မူဆယ်ပြေးဆွဲတဲ့ခရီးသည်တင်ကားမှောက်ပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးကာ ၁၄ ဦးဒဏ်ရာရ
မန္တလေး - မူဆယ် ပြေးဆွဲနေတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက မူဆယ်မြို့နားမှာ တိမ်းမှောက်ပြီး နှစ်ဦး သေဆုံးကာ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်တု မထားရန် ပစ်စာပေးကန့်ကွက်သူရှိ၍ ထားရှိရန် ကြန့်ကြာနေဟုဆို
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံး မြန်မာလူမျိုးကျောင်း အုပ်ကြီး၊ မြန်မာစာဌာနတည် ထောင်သူ ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်တု ကို ၂၀၁၉ နှစ်ဆန်းတွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာန၌ ထားရှိ ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ပစ်စာ ပေးကန့်ကွက်သူရှိ၍ ကြန့်ကြာနေ ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန် မာစာဌ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးသည့် မြန်မာတစ်ဦး၏အလောင်းကို သွားရောက်သယ်ဆောင်သူ ပျောက်ဆုံးနေဟုဆို
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ် လုပ်နေစဉ် သေဆုံးသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်း ကို မြန်မာဘက်သို့သယ်ဆောင် လာသူတစ်ဦး လမ်းခုလတ်၌ အ လောင်းထည့်လာသည့် ကားနှင့် အတူ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ကာယကံရှင်၏မိသားစုဝင်များ နှင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များက ပြောသည်။
တရုတ်သံအမတ်ကြီးအသစ်အဖြစ် မစ္စတာချန်ဟိုင် စတင်ထမ်းဆောင်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အ သက်(၄၈)နှစ်အရွယ်မစ္စတာချန် ဟိုင်သည် ယခုရက်ပိုင်းကစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး မကြာ မီ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံ သံအမတ်ကြီးခန့်အပ်လွှာ ပေး အပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဖားကန့်တွင် ဇူလိုင် ၁ ရက်ကစ၍ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခွင့် သုံးလရပ်နားရန် ညွှန်ကြား
ဖားကန့်ဒေသတွင် ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီများ သတ္တု တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခွင့်သုံးလရပ် ဆိုင်းထားရန် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း က ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်သည်။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းတွင် ယာဉ်သုံးစီးတိုက်မိ၊ အမျိုးသားနှစ်ဦး သေဆုံး
သဲကုန်းမြို့နယ် အင်းမမြို့ တပ်မ (၆၆) အနီး ရန်ကုန်-ပြည် လမ်းတွင် ဇွန်လ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ က ယာဉ်သုံးစီး တိုက်မိရာ အမျိုး သားနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
မြောက်ဦးမြို့အနီး တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံရှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
မြောက်ဦးမြို့နှင့် တစ် မိုင်ခန့်အကွာရှိ မကျားတောင် တန်းပေါ်တွင် ယမန်နေ့ကတိုက် ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အနီးဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံရှစ်ဦးလက် နက်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ငါးဦး မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း မြောက်ဦးမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာ စိန်က ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကို ကန့်ကွက်ထားမှု ကန့်ကွက်သူရှုံး
မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရ သော ဒီချုပ်ပါတီဝင် ဦးစိုင်းပန်း ဆိုင်အား ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) က ကန့်ကွက်ထားမှုကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် အမိန့်ချမှတ်ရာ ဒီချုပ်ပါ တီအား အနိုင်ပေးခဲ့သည်။
ဝေဖန်ခံနေရသော တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နှင့် အင်းစိန်စုပေါင်းရာဇ၀တ်ရုံးစီမံကိန်းများ ပါဝင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ လျာထားဘတ်ဂျက်ကို ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်သို့တင်မည်
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များဝေဖန် နေသော တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ အင်းစိန်စုပေါင်း ရာဇ၀တ်ရုံး ဆောက်လုပ်မည့် စီမံကိန်းများ ပါသော ၂၀၁၉-၂၀ ဘတ်ဂျက် လျာထားချက်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရေးကော်မရှင်သို့ ဆက်လက်တင် ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းလွှတ် တော်က အတည်ပြုသည်။
ကျိုင်းတုံတွင် လေပြင်းကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းပြိုကျ၍ ပညာသင်ကြားရေးအခက်တွေ့နေ
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများအတွင်း ယခုနှစ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကိုယ်ထူကိုယ် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ပြိုကျ၍ စာ သင်ကြားရေးအခက်တွေ့နေပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေး အကူအညီပေးရန် ယင်းကျောင်း မှ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက မေတ္တာရပ်ခံသည်။
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်း၌ ကျပ်ငွေဖြင့်သာ ငွေပေးချေရန် ထုတ်ပြန်
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လေကြောင်းလိုင်းများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ငွေပေးချေရာတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် မပြုလုပ်ဘဲ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ရယူ၍ငွေလဲကောင်တာများထားရှိရန်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ကျောက်တန်းရွာဖြစ်စဉ်မျိုး နောင်မကြုံရန် သက်ဆိုင်သူများ ဂရုပြုသင့်ဟု လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အကြံပြု
ကျောက်တန်းရွာဖြစ်စဉ် ကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များ နောက်ထပ်မဖြစ်စေရန် သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် ဂရုပြုသင့်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်သင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်သည်။
မယ်ခွေ၏ ‘လက်ဆောင်’ ကဗျာကို ဒသမတန်းသင်ရိုးသစ်တွင် ပြောင်းလဲထည့်သွင်းမည်
အဋ္ဌမတန်းမြန်မာစာ သင်ရိုးမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် စာဆို တော်မယ်ခွေ၏ ‘လက်ဆောင်’ ကဗျာကို သင်ရိုးသစ်ဒသမတန်း မြန်မာစာတွင် ပြောင်းလဲပြဋ္ဌာန်း မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် ကြေညာ သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများသည် ဟန်ဆောင်မှုများလားဟု ပြန်သုံးသပ်ရန် ဦးခင်ဇော်ဦးပြော
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး မှုများသည် ဟန်ဆောင်မှုများ လားဟု ပြန်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ အစိုးရအ စုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဇော် ဦးကမေးခွန်းထုတ်သည်။
ကြည်လင်း အပါအ၀င် ကစားသမားသစ် လေးဦးကို ဇွဲကပင်အသင်းခေါ်ယူ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ကြည်လင်း အပါအ၀င် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကစားသမားသစ်လေးဦးကို မြန်မာလိဂ် ဒုကျော့ရာသီအတွက် ဇွဲကပင်အသင်းက အားဖြည့်ခေါ်ယူခဲ့ ကြောင်း အသင်းမီဒီယာတာဝန်ခံ ကိုအေဇော်က ပြောသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သက်ငယ်တန်းနှင့် အလွတ်တန်း လှေလှော်ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကျင်းပ မည့် အရှေ့တောင်အာရှ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ သက်ငယ်တန်း လှေ လှော်ပြိုင်ပွဲနှင့် အလွတ်တန်းလှေ လှော်ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာလှေလှော် အသင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်း မော်လမြိုင်နှင့် ထားဝယ်သို့ ခြေစမ်းခရီးစဉ်သွားမည်
အာဆီယံအမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ အကြိုပြင်ဆင်မှု အဖြစ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုး သမီးဘောလုံးအသင်းသည် မော်လမြိုင်နှင့် ထားဝယ်မြို့သို့ ခြေစမ်း ခရီးစဉ် သွားရောက်မည် ဖြစ် သည်။
ကစားသမားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့် Genius Sports နှင့် မြန်မာလိဂ် ဆွေးနွေး
မြန်မာလိဂ် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေ သည့် ကစားသမားများ၏ စွမ်း ဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့် လေ့ လာနိုင်ရန် Genius Sports ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာလိဂ်တို့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပြည်ပသို့ ရောင်းချမှု ပြီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူထက် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ခန့်ပိုရ
ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု ကြောင့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရှစ်လအတွင်း ပြည်ပသို့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုမှ ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ၀င်ငွေကန်ဒေါ် လာသန်း ၁၀၀ ခန့်ပိုရရှိထား ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက် ထောက်အတွင်းဝန်ဦးခင်မောင် လွင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်း စီမံကိန်း အပိုင်း(၁) အတွက် တင် ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီကို အောက်တိုဘာလအတွင်း အပြီး သတ်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည် ဇော်မြင့်က ပြောကြားသည်။
GGS ကုမ္ပဏီက အစိုးရထံပေးသွင်းရန် ဓာတ်ငွေ့ဖိုး ကျပ်ခြောက်ဘီလီယံကျော် အကြွေးကျန်ရှိ
တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါ်လဲ့လဲ့မော် အဂတိအမှုတွင် ပတ်သက်နေသော GGS ကုမ္ပဏီသည် အစိုးရ ထံ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖိုး ကြွေးကျန် လစဉ်ပုံမှန်ပေးသွင်းနေပြီး လက် ရှိ၌ ကြွေးကျန် ကျပ် ၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကျန်ရှိသေးကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတ
လူအများစုက လူမှု ကွန်ရက်ကို သတင်းစီးဆင်းရာ နေရာ၊တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဆက်သွယ်ရာ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ မိတ်ဆက်ရာ၊အသိပညာဖလှယ်ရာ၊ သတင်းစကားတွေ ပြန့်ပွားရာ နေရာဆိုတဲ့အွန် လိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲ မှတ်ယူကြမှာ ပါ။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှု အ၀
နာမည်ကြီးအဆို တော်အရီယာနာဂရန်ဒီကကိုယ် ၀န်ဖျက်ချမှုတားဆီးရေးဥပဒေ သစ်နှင့်ကြုံနေစဉ်အမေရိကန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုအကူအညီပေးနေသော Planned Parenthood အဖွဲ့သို့ ကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ လှူဒါန်း ခဲ့သည်။
ဂျပန်ခရီးစဉ်ဆက်လုပ်မယ့် iKON အဖွဲ့
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် B.I မကြာသေးမီက နုတ်ထွက် ခဲ့သော်လည်း တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားဂီတအဖွဲ့ iKON က အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦးတည်းဖြင့် မူလ က စီစဉ်ထားသည့် ဂျပန်ခရီးစဉ် ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
Myanmar Idol ဒိုင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
Myanmar Idol Season4တွင် ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကဒိုင်တစ်ဦးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနေအထားဖြင့် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
အိန္ဒိယမှာ ကျင်းပတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဆုနှစ်ဆုရတဲ့ မုန်းစွဲဇာတ်ကား
မုန်းစွဲရုပ်ရှင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သည့် Calcutta International Cult Film Festival (CICFF) တွင် မေလအတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုနှင့် ဒါရိုက် တာဆုရရှိခဲ့ကြောင်း ဒါရိုက်တာ သြရသက ပြောသည်။
အူရီးဒူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် GSMA တို့ပူးပေါင်း၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗဟုသုတ ပညာပေးရန် စီစဉ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီနှင့် GSMA အဖွဲ့အစည်းက မြန်မာ နိုင်ငံရှိ လူတစ်သန်းကို ဒစ်ဂျစ် တယ်ဗဟုသုတများ ပေးအပ်ရန် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ အူရီးဒူးနှင့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေးစီမံကိန်းကို အဓိကစိန်ခေါ်မှုသည် ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေးစီမံကိန်း အတွက် ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက် သည် အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်က ပြောသည်။
ANP ပါတီ လွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦး ပါတီမှ နုတ်ထွက်ခွင့်တင်
ရခိုင်အမျိုးသားပါ တီ (ANP) ညီလာခံကျင်းပပြီး နောက် ပါတီဝင်အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးသည် ပါတီမှ နုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထား သည်။ ပါတီမှ နုတ်ထွက်ခွင့်တင် ထားသူ နှစ်ဦးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်လတ် နှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)မှ ဦး ကျော်ကျော်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၆ ရက် က နုတ်ထွက်ခွင့်တင်ခြင်းဖြစ် သည်။